SIDA LOO QALLAJIYO BOQOSHAADA LOHODKA GURIGA - MUSHROOMS
Boqoshaada Oyster waa nooc caan ah oo qaali ah oo boqoshaada, kuwaas oo inta badan laga helaa roogaga. Kuwa doonaya inay si madaxbanaan u diyaariyaan boqoshaada lohodka qaabka la qalajiyey muddada dheer, waxaan kuu sheegi doonnaa sida saxda ah ee loo sameeyo, si ay dhadhanka kuugu daalaan mustaqbalka.
Miyuu suurtogal ah in la qalajiyo boqoshaada lohodka?
Waxaa jira talooyin ku filan talaabo talaabo oo ku saabsan internetka oo ku saabsan sida loo qalajiyo champignon, boqoshaada porcini iyo noocyada kale ee boqoshaada, laakiin macluumaad yar oo ku saabsan boqoshaada lohodka, maadaama ay badeecadani aysan caan u ahayn qalajinta. Sidaa darteed, dad badani way weydiinayaan in ay suurtagal tahay in la qalajiyo boqoshaada lohodka guriga. Jawaabta su'aashan waa mid wanaagsan: marka la eego in likahaan uu ku jiro qoyaan yar, waxaa si sahlan loogu qalajin karaa kaydinta si guul leh oo loo isticmaali karo foomka la qalajiyey.
Waa muhiim! Musqusha laysku qurxiyo ayaa si fiican loo kaydiyaa muddo dheer, sidaas darteed waxay ku siin karaan fursad ay ku barafoobaan, cusbada ama cuntada qasacadaysan.
Waxaa sidoo kale muhiim ah in boqoshaada lohodka la qallajiyo meel aad u yar, laakiin fursadaha ay isticmaalaan waa kuwo aad u ballaaran.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato cuntada sida lakala qaado boqoshaada caanaha, boletus iyo nalka.
Si aad u fuliso nidaamka qalajinta sida ugu dhakhsaha badan iyo waxtar leh, waa inaad soo baarto daba galka dakhliga:
mindi si uu u diido oo uu gooyo boqoshaada;
ku qallaji maro adag si aad u dhameysato nidaamka ka saarista wasakhda;
inaad jarjaratid gudaheeda oo aad jarjarayso likaha lohodka;
waraaqda lagu faafiyo boqoshaada;
dhaadheer dhaadheer ama silig si aad u qalajiso boqoshaada qalajinta;
qalajiyaha korantada (ikhtiyaar) ee qalajinta.
Ka hor inta aadan bilaabin qalajinta, boqoshaada waa in marka hore la diyaariyo.
Waa in la ogaadaa in boqoshaada lohodka ha dhaqin oo ha karkarin kahor intaadan qalajin, geeddi-socodka oo dhan waxaa lagu sameeyaa alaab qalalan.
Musqul kasta waa in la baaraa goobaha wasakhaysan, iyo haddii ay joogaan, xoqin adoo saaraya wasakh leh mindi, iyo sidoo kale lugaha ka soo xiro.
Ma taqaanaa? Kobcinta firfircoon ee boqoshaada lohod waxaa lagu qabtay Germany. Muddadii dambe, waxaa jiray dhibaatooyin xagga dhaqaalaha ah ee dalka ka jira. Sababtoo ah xaqiiqda ah in noocaan oo ah musqusha aan la qabin oo kori kara qashinka qoryaha, wax soo saarkani wuxuu gacan ka geystay qayb ballaaran oo dadweynaha ah si ay uga badbaadaan macluusha.
Si aad uga saarto qaybo yaryar oo qashin ah iyo wasakh, ku tirtir walxo kasta oo maro qalalan oo qalalan.
Habka qalajinta: Tallaabo tallaabo tallaabo ah
Waa in la ogaadaa in qalajinta boqoshaada loo samayn karo laba siyaabood: adoo isticmaalaya qalajiye koronto khaas ah, ama hawada furan. Tixgeli hab kasta si gooni ah.
Baro sida loo qalajiyo plomme, jeeriga, blueberries, tufaax, isteroberi, strawberries, currants, qolof, geedka, caleenta (dill, dhir, cilantro, isbinaajka, basasha cagaaran, sorrel), yaanyo, basbaas.
Qalajinta boqoshaada lohodka hawada furan waa habka ugu fudud ee aanad u baahnayn qalab koronto oo gaar ah.
Waa muhiim! Waa in la ogaadaa in qalajinta boqoshaada hawada la geli karo oo keliya xilliga kulul, qalalan iyo qorraxda.
Ka fikir talaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan geedi socodka qallajinta likaha lohodka hawada furan:
Marka boqoshaada si buuxda loo nadiifiyo oo loo googooyo, waxaa lagu dhajiyay hal lakabka warqadda la diyaariyey.
Bannaanka waxaa la dhigaa qorraxda tooska ah, meel fiican oo hawo leh oo tagay ilaa 3 saacadood.
Boqolkiiba la qalajiyey boqoshaada waa in lagu dhajiyaa on dheer oo dhaadheer oo dhaadheer ama silig. Marka la isticmaalayo mawduuca, waa in lagu geliyaa irbadda si loo fududeeyo habka xawilaadda.
Musqusha lafdhabarka ah waa in la dhigaa meel kulul, oo qallalan, meel ku habboon mashiinka gaaska ee jikada. Si aad u qalajiso habkan, waxay qaadan kartaa qiyaastii hal maalin oo ah boqoshaada lohod.
Isticmaalka qalajiye koronto khaas ah, kaas oo khudaarta iyo miraha la qalajin karo, waxay si weyn u fududeyn doonaan geeddi-socodka qalajinta likaha lohodka iyo waqtiga gaaban.
Ogow waxa boqoshaada ay faa'iido u leedahay jirka: boqoshaada, boqoshaada, boqoshaada porcini, boletus, boqoshaada caanaha.
Nidaamka lagu qalajiyo boqoshaada lohodka qalajiyaha korantada wuxuu ka kooban yahay talaabooyinka soo socda:
Boqoshaada leysugu diyaariyey waa in la dhigaa shaandheeya shaandho, kaas oo soo gala fiilo qalajiye, oo lagu rakibay qalabka.
Heerkulka ugu horeeya waa inuu ahaado qiyaastii 50 ° C, shuruudahan oo kale sheyga waa inuu noqdaa qiyaastii 2 saacadood.
Waqtiga kadib, waxaa lagama maarmaan ah in kor loo qaado heerkulka ilaa 75 ° C oo qalalan ilaa qalajinta. Alaabta waxay ku jiri kartaa qalajiye korontada laga bilaabo 7 illaa 12 saacadood.
Waa mid aad u muhiim ah in aan la seegin daqiiqad marka boqoshaada horeba la qalajiyey. Haddii ay aad u qalalan yihiin, si dhakhso ah ayey u dhaqaajin doonaan waxayna noqonayaan kuwo aan ku habboonayn kaydinta muddada dheer. Waxsoosaar aan si fiican loo dhejin ayaa waxyeello u geystaa oo ka sii dara.
Si aan loogu qaldamin doorashada boqoshaada la cuni karo, waxaa muhiim ah in la kala saaro tijaabada khatarta ah. Wax badan ka baro miisaanka cad, caarada, jilicsan (madow, madow), volnushkah, doofaarka, chanterelles, aspen, mohovikov, podgruzdkah, agarics malab, rusulets, morels iyo tolidda, truffle madow.
Haddii boqoshaada si habboon loo qalajiyo, waxay noqon doonaan wax yar oo la bedbedeli karo, laakiin si fudud ayaa u jebin doona markaad isku dayeyso inaad u leexiso. Midabku waa inuu ahaadaa iftiin, urta iyo dhadhanka - isku midka ah ee boqoshaada cusub.
Tirada boqoshaada la qalajiyey waa inay ahaataa 10% wax soo saarka ceyriinka ah, taas oo ah, boqoshaada ayaa hoos u dhigi doona 90%.
Ma taqaanaa? Jasiiradda New Zealand, Musqusha loholaha lafdhabarta ayaa loo tixgeliyaa nooca caadiga ah ee musqusha iyo beeraheeda si adag ayaa loo mamnuucay. Soo-saaridda badeecadan ayaa sidoo kale la mamnuucay, si looga fogaado saameynta fangaska noolaha ah ee ku yaala xayawaanka degaanka.
Sidee iyo meesha lagu keydiyo
Kaydinta saxda ah ee boqoshaada lohodka qalalan waa fure u ah ilaalinta dhadhanka iyo muuqaalka, taas oo u oggolaan doonta in lagu kaydiyo muddo dheer. Xaaladda ugu muhiimsan ee kaydinta alaabta qalalan ee qallalan ayaa ah qoyaan yar, sidaa daraadeed boqoshaada lohodku ma noqdaan kuwo qoyan oo ka sii daraya.
Si looga hortago aboor ku jira boqoshaada, waa in la dhigo nadiif ah dhalooyinka dhalada ah, daboolo lakab kale oo warqad ah kuna soo dir meeshi qallalan, oo si fiican u hawo leh.
Waa in maskaxda lagu hayaa in boqoshaada lohodhuhu si dhakhso ah u nuugaan qoyaanka waxayna nuugaan urta urta. Sidaa daraadeed, waa mamnuuc in alaabta qallalan ay ku dhowaato saliida, saliidda ama alaabooyinka kale ee kor u qaada qoyaanka hawada, ama kuwa soo gudbin kara urka ajnabiga ee boqoshaada lohodka.
Sidaa darteed, waa wax fudud in la qalajiyo boqoshaada lohodka guriga. Waxa ugu muhiimsan waa in la tixgeliyo qaar ka mid ah xasaasiga ah ee diyaarinta alaabta iyo raacaan tilmaamaha geedi socodka qalajinta.